Tababare Solskjær oo TAARIIKH cajiib ah ka sameeyay Manchester United, kadib guushii ay ka gaareen Brighton – Gool FM
(Manchester) 19 Jan 2019.Tababaraha Manchester United Ole Gunnar Solskjær ayaa galay taariikhda macalimiinta Red Devils, kadib guushii ay kaga gaareen 2-1 kooxda Brighton, kulankooda 23-aad ee horyaalka Premier League.
Shabakada “Squawka” ee ku caan baxday tirakoobyada ayaa waxay shaaca ka qaaday in tababare Ole Gunnar Solskjær uu noqday macalinkii ugu horeeyay taariikhda kooxda Manchester United ee 6-diisa kulan ugu horeysay horyaalka Premier League guul gaaray.
Labada gool ay caawa guusha ku gaartay kooxda Manchester United waxaa u kala dhaliyay xidigaha Pual Pogba iyo Marcus Rashford.
Ole Gunnar Solskjær ayaa qabtay shaqada tababarka ee kooxda Manchester United bishii hore, kadib markii shaqada laga ceyriyay Jose Mourinho.
Natiijada ay maanta gaartay kooxda Manchester United waxay sare u qaadeen dhibcahooda dhanka kala sareynta horyaalka Premier League, waxayna haatan leeyihiin 44 dhibcood, iyagoo si ku meel gaar ah ku fadhiya booska 5-aad, kahor inta laga ogaanayo natiijada kulanka haatan socda ee u dhexeeya kooxaha Chelsea iyo Arsenal.
Ma Maqashay in Mesut Ozil uu Xiisad adag ka dhex abuuray kooxda AC Milan!!......(Sidee wax u jiraan???)